Sɛ Wutu Wo Ho Ma a, Ma Ɛnhyɛ Yehowa Nyankopɔn Anuonyam! | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
‘Munhyira Yehowa sɛ nkurɔfo yii wɔn yam bae.’—ATEM. 5:2.
NNWOM: 150, 10
ADƐN NTI NA WUGYE DI SƐ . . .
obi a ɔtoto Yehowa adwuma ase no, Yehowa ani nnye ne ho?
sɛ nnipa de nokwaredi som Yehowa a, n’ani sɔ, na otua wɔn ka?
wutu wo ho ma yɛ Yehowa som adwuma a, n’ani sɔ?
1, 2. (a) Asɛm bɛn na Elifas ne Bildad ka faa sɛnea Onyankopɔn bu ɔsom a yɛde ma no no ho? (b) Dɛn na Yehowa ka faa nsɛm a Elifas ne Bildad kekae no ho?
ELIFAS kae sɛ: “Ɔbarima so wɔ mfaso ma Onyankopɔn? Anaa nea ɔwɔ nhumu so wɔ mfaso ma no? Sɛ woyɛ ɔtreneeni a, ɛma ade nyinaa so Tumfoɔ no ani gye anaa, na mfaso bi wɔ so ma no sɛ wo kwan yɛ pɛ?” (Hiob 22:1-3) Woasusuw nsɛmmisa a ɛte saa no mmuae ho pɛn? Bere a Elifas a ofi Teman dii kan bisaa Hiob saa nsɛm no, ɛda adi sɛ na Elifas gye di sɛ mmuae no yɛ dabi. Elifas yɔnko Bildad a ofi Suha no mpo de, ɔkae sɛ nnipa ntumi nni bem wɔ Onyankopɔn anim.—Kenkan Hiob 25:4.
2 Nea na saa gyamserefo no reka ne sɛ, mfaso biara nni mmɔden a yɛrebɔ sɛ yɛde nokwaredi bɛsom Yehowa no so. Wɔkyerɛe sɛ, nnipa te sɛ abubummabaa, aboawa, anaa osunson wɔ Onyankopɔn ani so. (Hiob 4:19; 25:6) Sɛ yɛhwɛ asɛm no nea edi kan a, ɛbɛyɛ yɛn sɛ na Elifas ne Bildad reda ahobrɛase adi. (Hiob 22:29) Nea ɛbɛma yɛaka saa ne sɛ, sɛ yegyina bepɔw tenten bi atifi anaa yɛte wimhyɛn mu na yɛhwɛ mpomma mu a, yehu nneɛma a nnipa ayeyɛ sɛ ɛyɛ nketenkete koraa. Nanso yemmisa sɛ, sɛ Yehowa fi soro hwɛ yɛn asase yi so a, saa na ohu Ahenni adwuma a yɛreyɛ no anaa? Dɛn na Yehowa ka faa nsɛm a Elifas ne Bildad kekae no ho? Ɔkaa Elifas, Bildad, ne Sofar anim sɛ wɔanka nokwasɛm. Nanso, Yehowa ani gyee Hiob ho, na ɔfrɛɛ Hiob sɛ “m’akoa.” (Hiob 42:7, 8) Nokwasɛm ne sɛ, onipa “so wɔ mfaso ma Onyankopɔn.”
‘DƐN NA WODE MA NO?’
3. Asɛm bɛn na Elihu ka faa mmɔden a yɛrebɔ sɛ yɛbɛsom Yehowa no ho, na dɛn na na ɔrekyerɛ?
3 Yehowa anteɛ Elihu so sɛ obisaa asɛm a edi hɔ yi. Elihu bisae sɛ: “Sɛ woyɛ nea ɛteɛ a, dɛn na ɛde ma [Onyankopɔn], na dɛn na onya fi wo nsam?” (Hiob 35:7) Enti nea na Elihu reka ne sɛ mfaso biara nni mmɔden a yɛrebɔ sɛ yɛbɛsom Onyankopɔn no so anaa? Dabi. Nea na Elihu reka ne sɛ, sɛ yɛansom Yehowa a, hwee renhia no. Yehowa nhia obiara mmoa. Yɛrentumi mma onnya ne ho, anaa onnya tumi nka nea ɔwɔ no ho. Mmom no, suban pa, ɔdom akyɛde, ne ahoɔden biara a yɛwɔ no, Onyankopɔn na ɔde ama yɛn. Na ohu sɛnea yɛde akyɛde a ɛte saa no yɛ adwuma.
4. Yehowa de adɔe a yɛyɛ afoforo no toto dɛn ho?
4 Sɛ yɛyɛ Yehowa asomfo adɔe a, Yehowa fa no sɛ ɛyɛ ɔno ankasa na yɛreyɛ ama no. Mmebusɛm 19:17 ka sɛ: “Nea ɔdom ɔbrɛfo no de fɛm Yehowa, na nea ɔde ama no, Obetua no ka.” Yemmisa sɛ, nea kyerɛwsɛm yi reka yi kyerɛ sɛ adɔe biara a yɛyɛ abrɛfo no, Yehowa hu anaa? Yebetumi aka paa sɛ, yɛn nnipa a yɛnsɛ hwee yi, sɛ yɛyɛ afoforo adɔe a, amansan Bɔfo no fa no sɛ ɔde yɛn ka anaa? So obu adɔe a ɛte saa a yɛyɛ no sɛ ɛyɛ bosea a yɛabɔ no, na ɔbɛhwɛ atua yɛn ka na wahyira yɛn wɔ ho anaa? Ɛte saa, na Onyankopɔn Ba no sii so dua.—Kenkan Luka 14:13, 14.
5. Nsɛmmisa bɛn na yɛrebesusuw ho?
5 Yehowa frɛɛ odiyifo Yesaia sɛ ɔmmɛkasa mma no. Wei kyerɛ sɛ, Yehowa ani gye ho sɛ ɔde nnipa anokwafo bedi dwuma ama n’atirimpɔw abam. (Yes. 6:8-10) Yesaia yii ne yam gyee frɛ a Yehowa frɛɛ no no so. Ɛnnɛ, nnipa mpempem pii ayi wɔn yam reka sɛ “Mini, soma me.” Nnipa a wɔte saa no reyɛ nnwuma ahorow a ɛyɛ den wɔ Yehowa som mu. Nanso, ebia obi bebisa sɛ: ‘Enti adwuma a mereyɛ no ho hia ankasa? Ɛwom, m’ani sɔ sɛ Yehowa adom me ama mereyɛ n’adwuma no bi. Nanso, sɛ meyere me ho oo, sɛ manyere me ho oo, so Yehowa renyɛ nea ehia sɛ ɔyɛ biara mma n’Asɛm no mma mu anaa?’ Momma yɛnhwɛ sɛnea nsɛm bi a esisii wɔ Debora ne Barak bere so no bɛboa yɛn ama yɛanya saa nsɛmmisa yi ho mmuae.
EHU KAA WƆN, NANSO ONYANKOPƆN HYƐƐ WƆN DEN
6. Nsonsonoe bɛn na na ɛwɔ nnipa a na wɔte Israel nkuraa ase ne Yabin asraafo no ntam?
6 Ná Kanaan hene Yabin ‘ahyɛ Israelfo so denneennen’ mfe 20. Ná nkuraa no asefo suro mpo sɛ wobefi adi. Sɛ wohwɛ Israelfo a na wɔtete nkuraa ase no a, sɛ ɛba akodi a, na wɔrentumi nnyina Yabin asraafo no anim efisɛ na Israelfo no nsiesiee wɔn ho. Ná wonni akode a wɔde bɛkɔ ɔko anaa nea wɔde bɛbɔ wɔn ho ban. Nanso, wɔn atamfo no de, na wɔwɔ ɔko nteaseɛnam 900 a kantankrankyi tuatua ho.—Atem. 4:1-3, 13; 5:6-8. *
7, 8. (a) Akwankyerɛ bɛn na Yehowa dii kan de maa Barak? (b) Ɛyɛɛ dɛn na Israelfo no dii Yabin asraafo no so nkonim? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
7 Yehowa nam odiyifobea Debora so de ahyɛde a emu da hɔ yi maa Barak sɛ: “Fa mmarima mpem du fi Naftali ne Sebulon mmusua mu ka wo ho kɔ Bepɔw Tabor so. Na mɛtwetwe Yabin sahene Sisera ne ne nteaseɛnam ne ne dɔm aba wo nkyɛn wɔ Kison subon no ho, na mede no bɛhyɛ wo nsa.”—Atem. 4:4-7.
8 Atuhoamafo a na wɔrehwehwɛ wɔn no ho asɛm no trɛwee. Wɔn a wɔatu wɔn ho ama no boaboaa wɔn ho ano wɔ Bepɔw Tabor ho. Barak yɛɛ ntɛm de akwankyerɛ a Yehowa de mae no yɛɛ adwuma. (Kenkan Atemmufo 4:14-16.) Bere a ɔko no ankasa rekɔ so wɔ Taanak no, osu kɛse bi tɔe mpofirim maa ɛhɔ nyinaa danee atɛkyɛ. Barak tiw Sisera asraafo no akwansin 15 (kilomita 24) koduu Haroset. Bere a Sisera duu ɔkwan no mu baabi no, osi fii ne teaseɛnam no mu. Ná anka teaseɛnam no yɛ akode a ɛyɛ hu, nanso afei de na abɛyɛ akode a mfaso biara nni so. Ɛno akyi no, otuu mmirika kɔɔ Saananim. Ɛbɛyɛ sɛ na Saananim bɛn Kedes. Sisera kɔhwehwɛɛ guankɔbea wɔ Kenini Heber yere Yael ntamadan mu, na Yael gyee Sisera fɛw so. Esiane sɛ na ɔko no ama Sisera abrɛ nti, ɔdaa hatee. Ná Sisera ayɛ mmerɛw saa bere no. Enti Yael de akokoduru kum no. (Atem. 4:17-21) Israelfo dii wɔn tamfo no so nkonim! *
ATUHOAMA ADWUMA—ƐHO ADWENE A ƐTEƐ NE NEA ƐNTEƐ
9. Ɔko a Israelfo ne Sisera koe no ho nsɛm bɛn na ɛwɔ Atemmufo 5:20, 21?
9 Ɛsɛ sɛ yesua Atemmufo ti 4 ne ti 5 bom, efisɛ sɛ yɛkenkan ti 5 no a, ɛboa yɛn ma yɛte nsɛm a ɛwɔ ti 4 no ase yiye. Sɛ nhwɛso no, Atemmufo 5:20, 21 ka sɛ: “Nsoromma fi soro bɛkoe, wofi wɔn akwan so ne Sisera bɛkoe. . . . Kison asubɔnten hohoroo wɔn kɔe.” Kyerɛwnsɛm yi kyerɛ sɛ abɔfo bɛboaa Israelfo no anaa abo bi na efii soro bekunkum Kanaanfo no anaa? Kyerɛwnsɛm no nkyerɛkyerɛ mu. Nanso, ɛma yehu sɛ osu kɛse no tɔɔ beae pɔtee bi wɔ bere pɔtee bi mu maa ɔko nteaseɛnam 900 no tintimii. Sɛ ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔma ɛbaa saa a, hena bio na obetumi ayɛ saa? Atemmufo 4:14, 15 ka no mprɛnsa sɛ Yehowa na ɔmaa Israelfo no dii nkonim. Israelfo 10,000 a wotuu wɔn ho mae no mu biara nni hɔ a na obetumi ahoahoa ne ho sɛ ɔno na ɔmaa Israelfo no dii nkonim.
10, 11. Dɛn ne “Meros,” na adɛn nti na wɔdomee no?
10 Bere a Israelfo no dii nkonim anwonwakwan so no, Debora ne Barak too nkonimdi dwom bi de hyiraa Yehowa. Nanso, nea ɛyɛ nwonwa ne sɛ, bere a wɔreto dwom no, wɔkae sɛ: “Yehowa bɔfo kae sɛ, ‘Monnome Meros,’ ‘Monnome ɛhɔfo, efisɛ wɔammɛboa Yehowa, wɔamfa nnɔmmarima ammɛboa Yehowa.’”—Atem. 5:23.
11 Ɛda adi sɛ, dome a wɔdomee Meros no yɛɛ adwuma paa efisɛ seesei yennim dekode a na wɔfrɛ no Meros no. Ná ɛyɛ kurow a bere a na wɔrehwehwɛ nkurɔfo ama wɔatu wɔn ho ama no, emufo antu wɔn ho amma anaa? Sɛ na ɛyɛ kurow a ɛda ɔkwan a Sisera faa so guanee no ho a, yemmisa sɛ, na anka emufo betumi akyere Sisera ɛnna wɔankyere no anaa? So na kurow no mufo betumi aka sɛ wɔante sɛ Yehowa rehwehwɛ nkurɔfo ama wɔatu wɔn ho ama anaa? Anyɛ yiye koraa no, nnipa mpem du na wofi saa ɔmantam no mu tuu wɔn ho mae kɔkoe. Yɛmfa no sɛ, nnipa a na wɔwɔ Meros no huu Sisera a na ɔyɛ ɔkofo a ne tirim yɛ den no sɛ ɔno nkutoo de ahoyeraw retu mmirika atwam wɔ wɔn kurow no mu. Ná anka wei bɛyɛ hokwan kɛse a nnipa a na wɔwɔ Meros no de bɛyɛ biribi aboa ama Yehowa atirimpɔw anya nkɔso na ama wɔanya Yehowa nhyira. Nanso yemmisa sɛ, bere a wonyaa hokwan kɛse a ɛte saa no, wɔanyɛ ho hwee anaa? Sɛ saa a, ɛnde hwɛ nsonsonoe kɛse a na ɛwɔ nnipa a wɔwɔ Meros no ne Yael ntam. Kyerɛwsɛm a edi hɔ no bɔ amanneɛ sɛ, Yael de, ɔyɛɛ ade akokoduru so!—Atem. 5:24-27.
12. Nsonsonoe a ɛwɔ nnipa suban mu bɛn na yehu wɔ Atemmufo 5:9, 10, na dɛn na ɛsɛ sɛ yesua fi mu nnɛ?
12 Ɛsono suban a nnipa a wɔne Barak kɔɔ ɔko no daa no adi, ɛnna ɛsono suban a wɔn a wɔne no ankɔ no nso daa no adi. Atemmufo 5:9, 10 ma yehu saa nsonsonoe no. Debora ne Barak kamfoo ‘Israel asahene a woyii wɔn yam bae’ no. Wɔn a woyii wɔn yam bae no, na wɔnte sɛ wɔn a ‘wɔtete mfurummere so’ no koraa. Ahantan nti, wɔn a na ‘wɔtete mfurummere so’ no ankɔ ɔko no bi, na mmom na ‘wɔtete kuntu fɛfɛ so’ a nea ɛkyerɛ ne sɛ, na wɔn ani gye asetena pa ho! Saa nkurɔfo no ‘faa atempɔn so,’ kyerɛ sɛ, na wɔpɛ asetena a ahotɔ wom. Nanso, wɔn a wɔne Barak kɔe no de, wotuu wɔn ho mae dii ako wɔ Tabor mmepɔw a ɛso yɛ mmonkyimmɔnka so ne Kison subon a emu yɛ atɛkyɛ no mu! Wɔka kyerɛɛ wɔn a wodi anigyede akyi no nyinaa sɛ ‘wonsusuw ho!’ Nokwasɛm ne sɛ, na ɛsɛ sɛ wɔn a wodi anigyede akyi no dwinnwen wɔn ani a na wɔabu agu Yehowa adwuma so no ho. Saa ara na ɛnnɛ, ɛsɛ sɛ obiara a ɔmfa ne koma nyinaa nsom Onyankopɔn no nso dwinnwen ho yiye.
13. Ɔkwan bɛn so na ɛsono suban a Ruben, Dan, ne Aser mmusuakuw no daa no adi ne suban a Sebulon ne Naftali mmusuakuw no nso daa no adi?
13 Wɔn a wotuu wɔn ho mae no huu sɛnea Yehowa daa ne ho adi sɛ ɔno ne Otumfoɔ pumpuni no. Enti, bere a “wofii ase kaa Yehowa adetrenee ho asɛm” no, wonyaa biribi titiriw a na wɔbɛka ho asɛm. (Atem. 5:11) Nanso, Atemmufo 5:15-17 ka Ruben, Dan, ne Aser mmusuakuw no mu biara ho asɛm sɛ wodwinnwen wɔn ankasa ahonyade ho sen sɛ wobedwen Yehowa adwuma no ho. Wɔn ankasa ahonyade a na wɔredwinnwen ho no bi ne wɔn nguan, nsuhyɛn, ne nsuhyɛn gyinabea. Nanso, Sebulon ne Naftali ‘de wɔn kra too wɔn nsam’ boaa Debora ne Barak. (Atem. 5:18) Suban a mmusuakuw ahorow no daa no adi wɔ wɔn ho a wobetu ama ho no, yebetumi anya asuade titiriw bi afi mu.
14. Ɛnnɛ, dɛn na yɛyɛ de kyerɛ sɛ yɛtaa Yehowa tumidi akyi?
14 Ɛnnɛ, wɔmfrɛ yɛn sɛ yenkodi ako wɔ honam fam, na mmom yɛanya hokwan sɛ yɛde nsi ne ahokeka bɛka asɛmpa no akokoduru so. Ɛnnɛ paa na ehia sɛ Yehowa asomfo tu wɔn ho ma wɔ n’ahyehyɛde no mu. Anuanom mmarima, anuanom mmea, ne mmabun ɔpepem pii atu wɔn ho ama reyɛ bere nyinaa som adwuma no sɛ akwampaefo, Betel adwumayɛfo, ne Ahenni Asa adansifo atuhoamafo. Ebinom nso tu wɔn ho ma yɛ nnwuma wɔ amansin ne amantam nhyiam ase. Wo de, yɛnhwɛ asafo mu mpanyimfo a wɔne Ayaresabea Ntam Nkitahodi Boayikuw ahorow yɛ adwuma no, ne wɔn a wɔyɛ amantam nhyiam ho nhyehyɛe no. Wei yɛ asɛyɛde a emu yɛ duru paa. Ɛsɛ sɛ anuanom a wɔte saa no nya awerɛhyem sɛ Yehowa ani sɔ sɛ wɔatu wɔn ho ama reyɛ ne som adwuma no paa, na ne werɛ remfi adwuma a wɔreyɛ no.—Heb. 6:10.
Ansa na wubesi gyinae bi no, susuw sɛnea ɛbɛka w’abusua ne asafo a wowom no ho (Hwɛ nkyekyɛm 15)
15. Yɛbɛyɛ dɛn ahu sɛ Yehowa som adwuma no ho anigye a yɛwɔ no ano mmrɛɛ ase?
15 Ɛfata sɛ yɛn mu biara bisa ne ho sɛ: ‘Ɛnhaw me sɛ afoforo mmom na wɔreyɛ ɔsom adwuma no fã kɛse no ara? Honam fam nneɛma a merehwehwɛ no ho hia me kɛse sen ɔsom adwuma no a metu me ho ama ayɛ bi no anaa? Sɛnea Barak, Debora, Yael, ne nnipa 10,000 a wotuu wɔn ho mae no yɛe no, so me nso mewɔ gyidi ne akokoduru sɛ mede nea mewɔ biara bedi ahyɛde a emu da hɔ a Yehowa de ama yɛn no so? Sɛ meredwinnwen ho sɛ metu akɔtena kurow anaa ɔman foforo bi so akɔpɛ sika pii ne asetena pa a, so mabɔ ho mpae asusuw sɛnea ɛbɛka m’abusua ne asafo a mewom no ho anaa?’ *
16. Dɛn na yebetumi de ama Yehowa a onni bi dedaw?
16 Yehowa adi yɛn ni sɛ wama yɛanya hokwan ataa ne tumidi akyi. Efi bere a edi kan a Ɔbonsam daadaa nnipa sɛ wɔmmɛka ne ho mma wɔnsɔre ntia Yehowa tumidi no, sɛ wugyina Yehowa nniso no afã a, ɛma Satan hu pefee sɛ wunni n’afã. Gyidi ne nokwaredi na ɛma yetu yɛn ho ma yɛ Yehowa som adwuma no, na ɛsɔ n’ani. (Mmeb. 23:15, 16) Sɛ wotaa Yehowa tumidi akyi a, ɛma onya asɛm de bua mpoa a Satan atwa no no. (Mmeb. 27:11) Enti sɛ woyɛ osetie na wudi Yehowa nokware a, na wode biribi a ɛsom bo ma Yehowa rema no, na ɛma n’ani gye paa.
17. Dɛn na Atemmufo 5:31 ma yehu fa nneɛma a ɛbɛba daakye ho?
17 Ɛrenkyɛ, nnipa a wɔbɛtena asase so nyinaa bɛyɛ nnipa a wɔpɛ Yehowa tumidi sen tumidi foforo biara. Hwɛ sɛnea yɛrehwɛ saa da no kwan! Yɛte nka te sɛ Debora ne Barak. Wɔtoo dwom sɛ: “Yehowa, ma w’atamfo nyinaa nsɛe saa ara, na ma w’adɔfo nyɛ sɛ owia a egyina so denneennen.” (Atem. 5:31) Saa abisade yi bɛbam bere a Yehowa beyi Satan wiase bɔne yi afi hɔ no! Sɛ Harmagedon ko no fi ase a, wɔrenhia nnipa a wobetu wɔn ho ama asɛe atamfo no. Saa bere no, ‘yɛbɛyɛ komm na yɛahwɛ sɛnea Yehowa begye yɛn nkwa.’ (2 Be. 20:17) Nanso enkosi saa bere no, yɛwɔ hokwan pii a yɛde akokoduru ne nsi bɛtaa Yehowa tumidi akyi.
18. Atuhoama adwuma a woreyɛ no, ɛka wɔn a wonya so mfaso no sɛn?
18 Bere a Debora ne Barak fii wɔn nkonimdi dwom no ase no, Ɔsorosoroni no na wɔhyɛɛ no anuonyam, na ɛnyɛ nnipa. Wɔtoo dwom no sɛ: ‘Munhyira Yehowa sɛ nkurɔfo yii wɔn yam bae!’ (Atem. 5:1, 2) Ɛnnɛ nso, sɛ wutu wo ho ma a, ɛbɛka wɔn a wonya so mfaso no ama ‘wɔahyira Yehowa’ anaa wɔahyɛ no anuonyam.
^ nky. 6 Kantankrankyi yɛ dade tenten a ano yɛ nnam. Ɛtɔ da a, wɔkoa ano. Ɛbɛyɛ sɛ na wɔde kantankrankyi no tuatua nteaseɛnam no ntwahonan ho. Hena na na ɔbɛpɛ ne ho asɛm sɛ ɔbɛkɔ akode a ɛyɛ hu saa no ho?
^ nky. 8 Sɛ wohwɛ asɛm a wɔato din “Mesɔree sɛ Ɔbaatan wɔ Israel” no mu a, anigyesɛm yi ho nsɛm pii wom. Ɛwɔ August 1, 2015, Ɔwɛn-Aban no mu.
^ nky. 15 Hwɛ asɛm a yɛato din “Sikasɛm Ho Dadwene” a ɛwɔ July 1, 2015, Ɔwɛn-Aban mu no.